दिपावली / तिहार किन मनाइन्छ त ? - InHeadline
दिपावली / तिहार किन मनाइन्छ त ?
By Sujata Bhattarai on Oct 17,2017 - 07:26
Rangoli made on the day of Laxmi Puja
तिहारको रूपमा नेपालमा वा हिंदू धर्मको लागि सबै भन्दा ठूलो पर्वहरु मध्ये एक हो, दिवालीलाई नेपालीमा तिहार भनिन्छ, हिन्दू धर्म को लागि सबै भन्दा ठूलो पर्व हो। यो उत्सव पाँच दिन निरन्तर रूपमा मुख्यतया अक्टोबरमा कहिलेकाही नोभेम्बरको लागि मनाईन्छ। लामो समयदेखि सर्दियाको पूर्वोत्तर सँगसँगै त्यो उत्सव वातावरण हिन्दु जनताले पोषित गरेको छ। नेपालमा तिहार र भारत दुवैलाई पाँच दिनको लागि मनाईन्छ। तिनीहरू दुवैको प्रत्येक दिनको लागि व्यक्तिगत कारण छ, जबकि केहि दिन मनाउने एक भन्दा बढी कारण छ। नेपालमा, तिहारले दैत्यमा सबैभन्दा ठूलो त्यस्ता त्यस्ता त्यस्ता उत्सवहरू पछ्याउँछन्। त्यस्ता महोत्सवको बारेमा मिथ्या विज्ञान र अन्य सामाजिक र सांस्कृतिक मान्यताहरू आधारित हुन तहुर वा दिवाली मनाउन धेरै कारणहरू छन्। भारतमा दिवाली सबैभन्दा महोत्सव उत्सव किन कारणहरू वा नेपालका दोस्रो सबैभन्दा ठूलो त्योहार हो भनेर कारणले निम्न प्रकारका हुन सक्छ:
तिहार महोत्सवको दिन 1
त्यो उत्सवको पहिलो दिन धानटर भनिन्छ। दीवाली को यस दिन को देवी लक्ष्मी को जन्म को दिन - धन र समृद्धि को देवी। कार्तिक विरुद्धको दिन वा कार्तिक महिनाको नयाँ चन्द्रमा दिन (अमवासा) को दिन, अक्टोबरको नयाँ चन्द्रमा देवी लक्ष्मीले सामुद्ध मानथनको समयमा आफूलाई अवतार गरे। सामुद्ध मर्थन यो समय हो जब दूध को ब्रह्माण्ड महासागर अमृत प्राप्त गर्न को लागी शुभ र सेना को सेना द्वारा पकडिएको थियो, एक पोषण जो अनन्तता सम्म जीवन को रक्षा गर्नेछ। यसैले, हामी भन्न सक्छौं कि यो देवी लक्ष्मी को पूजा संग तिहार को लिङ्क को संकेत हो।
Surrounding being lighten up on the occasion of Tihar
देवी लक्ष्मी माता एचभी वालपेपर
यो दिन पनि धनभन्थी नामको अर्को देवी को जन्मदिन को प्रतीक गर्दछ। त्यो स्वास्थ्य र उपचार को देवी हो। उनी सबै रोगहरूको उपचार गर्न सक्षम छन् र उनको उपासना मृत्यु र रोगहरूबाट मानिसहरू र मानिसजातिलाई बचाउनको लागि आफ्नो प्रभावमा बढ्दै जान्छ। यस प्रकार, यस दिन धेरै मान्छे कपडा किनमेल र लगानी योजनामा ​​लगानी गर्न थाले, देवी लक्ष्मीको कारण व्यवसाय सुरु गर्दै र देवी धनवांटी को स्वास्थ्य मा खर्च गर्दछ।
तिहार को दिन 1 काग तिहार को रूपमा चिनिन्छ यो यसको अर्थ तहुर वा कोणको त्योहार हो। क्यूजहरू हाम्रो घरहरूमा आउने समाचारहरूको प्रतीक हो, नेपाली हिन्दुहरूले कङ्ग वा कुखुराको उपासना गर्न वर्षको यो दिन लिन्छन् र सधैं तिनीहरूलाई आफ्नो घरहरूमा सुसमाचार ल्याउन प्रार्थना गर्न र उनीहरूका पछाडीको कुकुरमा कुकुरको कुनामा, समाचार राम्रो छ। । यो कोणको उपासना पनि हो किनभने तिनीहरू कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोपको बारेमा जानकारी दिन तयार हुनुभन्दा पहिले हाम्रो मार्गको नेतृत्व गर्थे। यसैले तिहारको पहिलो दिन पनि काग तिहार भनिन्छ वा त्यो उत्सवको महोत्सव भनिन्छ।
Flowers on the market on the occasion of Tihar
तिहार समारोहको दिन 2
दिवाली को दोस्रो दिन को नाक Chaturdashi भनिन्छ। कृष्णा, सत्यभामा, र काली तीन हिन्दू धर्मका देवताहरू नारकासारा राक्षसलाई मार गर्ने प्रयास गरे। उनको मृत्यु पछि नरकसुरको कैदीबाट 16000 महिलाहरु लाई उद्धार गरियो। यो दिन आम तौर पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, गोवा र कर्नाटक को दीवाली को रूप मा जाना जाता छ। यस दिन, घर सजाय गरिन्छ र विशेष बाथिंग अनुष्ठान सुगन्धित तेल स्नानबाट सञ्चालन गरिन्छ। थुप्रै परिवारले पनि मिठाई तयार पार्छन्।
नेपालको दिन तिहारको दुई जना हाम्रो वफादार घरेलु जनावर कुकुरहरूको विशेष उपचार हो। दिन मनाईएको छ किनभने कुकुरहरू वफादार र विश्वासको प्रतीक हो। तिनीहरू भरोसा गर्न सकिन्छ र धेरै वफादार छन्। यो आशीर्वादको रूपमा प्रतीक बनाउन र मानिसजातिको सबैभन्दा असल साथीको रूपमा आफ्नो प्रयास स्वीकार गर्न नेपाली हिन्दूहरूले यो दिन कुकुरको दिनको रूपमा मनाउँछन्। कुकुरहरू आफ्नो सबैभन्दा मनपराएका खानाहरू, लुगाहरूसँग पूजा गरिन्छ र हिँड्न र खेल्नका निम्ति बाहिर लैजान्छन्। साथै, मानिसहरू घरमा छैनन् जब कुत्तहरू हाम्रो घरको अभिभावक हुन्। यो दिन पनि तिनीहरूलाई घरको अभिभावक र मानवजाति सुरक्षित राख्न को लागि उनीहरूलाई धन्यवाद दिइन्छ।
कुकुर कुमार पूजा तिहार को त्यो उपासना
कुकुर तिहारमा एक कुकुर पूजा गरिन्छ
दिवाली / दीपवाली / दीपावली (तिहार) फेस्टिवल दिवस
हिन्दू धर्ममा, देवी लक्ष्मी पनि विश्वास धन को देवी हो। आफ्नो जन्मदिन को यो शुभ दिन मा, नेपाली हिन्दूहरूले पनि यो दिन मनाएको दिनलाई देवी लक्ष्मी को जलाउन मनाउने र देवी लक्ष्मीलाई खुसी बनाउँछन्।। उनीहरूले देवी लक्ष्मीलाई पनि प्रार्थना गर्दछन् कि सधैँ उनीहरूको आशीर्वादी हो कि उनीहरूको परिवार र आफन्तको सम्पत्तिको कमीको कारण कुनै दुर्भाग्यपूर्ण चीज हुनेछ। माना जाता है कि देवी लक्ष्मी को धन को संरक्षक माना गएको छ र त्यो उनको उपासकहरु लाई राम्रो उपयोग र धन देखि पारस्परिक र सामाजिक वृद्धि को लागि मार्गदर्शन गर्नेछन्। पौराणिक कथाअनुसार हिन्दु धर्मको त्रिपक्ष्य मध्ये एक, भगवान विष्णु, संसारको पूर्वनिर्भर देवी लक्ष्मी को एकदम राम्रो आधा छ। दीवाली वा तिहार को यो विशेष दिन मा, यो मानिन्छ कि भगवान विष्णु वामन-अवताारा को अवतार ले लिया। यो उनको पाँचौं अवतार थियो र उनले राजा बालीको जेलबाट देवी लक्ष्मीलाई बचाए। यसरी यो अन्य कारणहरु मध्ये एक हो जुन दिवाली, भगवान विष्णु संग महानतम देवी को संघ को उत्सव मनाते हो। दिवाली तिहार फेस्टिवल मा लक्ष्मी पूजा को प्रदर्शन - कदम चरण निर्देश विद्या द्वारा चरण मा नेपाल मा लक्ष्मी पूजा गर्न को लागी भारत मा लक्ष्मी पूजा को प्रदर्शन दिवाली तिहार फेर्तीअन्तर्गत, तिहार वा दीवालीको तेस्रो दिन, देवी लक्ष्मीले पृथ्वीलाई रोम भनिन्छ। अनि हरेक घर जुन सुन्दर र सुत्न सकिन्छ, उनीहरूले ती घरहरू आशीर्वाद गर्नेछन् र ती घरहरू कहिल्यै धन मा समस्या हुनेछैन र सँधै समृद्ध हुनेछ। यसैले यो दिन रोशनी र मोमबत्तिहरू र दिइला भनिन्छ कि ल्यान्डवेयर लैंपको साथ मनाइएको छ। त्यहाँ पृथ्वीमा देवी लक्ष्मी भ्रमणको स्वागत गर्न केहि आतिशबाजी पनि छन्। नेपालमा, टिहरार गायको यो तेस्रो दिन पनि उपासना गरिन्छ। मुख्यतः, गायहरू देवी लक्ष्मीको अवतार मानिन्छ। अर्को कारण यो गायले हामीलाई दूध प्रदान गर्दछ र स्वर्गमा गेटवे भन्ने मानिन्छ। यो भनिएको छ कि 'दरो' पवित्र थ्रेडले दिनहुँ गाय को पूंछसँग बाँडिएको राक्षस भण्डानको समयमा पहेंलो गर्यो, स्वर्गको प्रवेश द्वार त्यो व्यक्तिको लागि सजिलै खुल्नेछ।
Stuffs prepared before worshipping laxmi
नेपाल नेपालमा तिहार मनाउने अर्को कारण हो। हिन्दू धर्म धार्मिक पुस्तकहरु को अनुसार, एक पल्ट राजा बाली को शर्मिंदा यज्ञ प्रदर्शन गरिरहेको थियो। फिलहाल, भगवान विष्णु ले आफ्नो पाँचवां अवतार लेणम को रूप मा लिया र राजा बाली को संपर्क गरे। राजा बाली कोलाहल गर्ने कोसिस गर्न वा आफ्नो महल मा सहयोग माग्न को लागि प्रसिद्ध थियो। भगवान विष्णु भिमना को रूप मा आफ्नो महल गए र पूछा कि राजा बाली आफ्नो इच्छाहरु लाई पूरा गर्नेछ। राजा बालीले आफ्नो माग पूरा गरे। भामानाले आफ्नो मागको रूपमा तीनवटा स्थानको लागि सोधे। एकपटक राजा बालीले सहमत गरे किमणना गति सुरु भयो। राजा बाली को महान आश्चर्य को लागि, भिमााना केवल दुई चरणहरु संग पुरा पृथ्वी र ब्रह्माण्ड को कवर संग। आफ्नो तेस्रो चरण राख्न कुनै स्थान छैन, भिमानाले आफ्नो तेस्रो चरण कहाँ पुग्न सोधे। त्यसपछि राजा बालीले आफ्नै टाउको चढाउँदा वाणानाले आफ्नो टाउको मागको रूपमा लिनु पर्यो। भगवान विष्णु, राजा बाली को यो भक्ति देखेर धेरै प्रभावित भयो। भगवान विष्णुले राजा बालीलाई आशिष् दिनुभयो र उसलाई सुथला नामक स्वर्गमा सर्वोच्च पदमा उठाए। उनले प्रभु विष्णुको पक्षलाई पनि प्राप्त गरे र उद्धार पाए। त्यसैले, कार्तिकको यो महिनामा (महिनामा राजा बालीले आफ्नै टाउको बलिदान गरे) अल्सागाइभाइको रूपमा मनाईन्छ र जो कोहीले स्वर्गमा स्थान पाउँनेछन् जो कोहीलाई। साथै, यो विश्वास छ कि जसले राजा बालीको नाममा यस महिनामा अलौकिकको लागि सोध्दछ, सहयोगको बिना फर्काइनेछैन। त्यसैले, महाभारतका साना छोराछोरी र किशोरीहरूको महानता गायन नेपालमा एक परम्परा हो। घरहरूमा गएर सुझावहरू र सहयोगहरू सोध्नुहोस्। दिवाली / दीपावली / दीपावली (तिहार) महोत्सवको दिन यो दिन गोवरान पूजा भनिन्छ र यो विशेष गरी मनाएको छ किनभने भगवान कृष्णले कर्तव्य बनाउनु बलिदानको युद्धमा बिजुली र वर्षाको भगवान ईन्द्र इन्द्रलाई पराजित गर्यो। भगवान कृष्णले किसानहरूलाई बहस गरे कि किसानहरू मात्र कर्तव्य र देवताहरूलाई बलिदान गर्न र देवताहरूलाई पूजा गर्नुको सट्टा उनीहरूलाई सहयोग गर्न चाहन्छन् र त्यसोभए किसानहरुले गरेनन्। यो, बारीमा, ईन्द्रा इंद्र र गाँउमा निरन्तर वर्षा र गल्ती गर्दछन्। यो सात दिन र सात रातको लागि वर्षा भयो। यस भगवान कृष्णलाई पराजित गर्न गोवार्डन हिल लाई उत्प्रेरित गर्यो र किसान र ग्रामीणहरुको लागि स्थानमा आश्रय दिनुभयो। यसैले नाम पनि गोवरदान पूजा पनि छ .चित्र, छवि, हिन्दु संस्कृतिको फोटो-क्यूडिंग (10) यस दिन पनि मनाईन्छ किनकि यसले नयाँ वर्षको सुरुवात गर्दछ जुन भगवान देवी लक्ष्मीको जन्म पछि मात्र हुन्छ। यस दिन भारत को केहि भागहरु मा मनाईएको छ बालीपतिप्रडा को रूप मा। यसको मतलब पति र पत्नीको दिन। तिनीहरूले उपहारहरू आदान प्रदान गर्छन् र यस दिन एक-अर्कासँग समय बिताउँछन्। यो दिन पति र पत्नी बीचको पारस्परिक प्रेम र भक्ति मनाउँछिन्। नेपालमा यो दिन पनि ओक्सको पूजाको लागि दिन हो। यो खेतहरु लाई पनी खेती गर्न किसानहरु को खेती मा मदद को लागि बक्स को धन्यवाद। नेपालीमा "हेलो" भनिने पोलो क्षेत्रको प्रयोग गरिएको सामग्री सामग्री बलराम को हात हो जुन भगवान कृष्ण को भाइ हो। उहाँ पनि ओक्स जस्ता शक्तिको प्रतीक हुनुहुन्छ र यो दिन महाभारत र कृष्ण लिलामा पनि उनीहरूको प्रयासको सम्झना मनाउन मनाईन्छ।